Mampiasà widgets ao amin'ny OS X Yosemite | Avy amin'ny mac aho
OS X Yosemite sy ny fampiasana widget
Con ny fahatongavan'i OS X Yosemite Manolotra zava-baovao maro isika, iray amin'izany ny iray fampidirana ireo widgets an'ny antoko fahatelo mankamin'ny ivon-toerana fampandrenesana nohavaozina, izay avy amin'ny "agregator" tsotra fampandrenesana hahitana fomba hafa amin'ny fitehirizana ireo fampandrenesana ireo. Ity fomba fampidirana fampandrenesana vaovao ity dia aingam-panahy avy amin'ny iOS 8 hatramin'ny ankapobeny, ny fandidiana dia mitovy ihany.
Ankehitriny dia tsy maintsy raisina an-tsaina fa lasa ity Notification Center vaovao ity vatasarihana tsotra hitahiry ny zava-drehetra mandra-panary azy rehefa nosokafantsika izy io, amin'ny interface miaraka amin'ny lafiny translucent izay manambara ny sary masina, ny ampahan'ny birao, ny fampiharana misokatra ... eo ambaniny ao anaty sosona ambany, izany dia miteraka fahatsapana lalina mifanaraka amin'ny iray manontolo. estetika vaovao izay harahin'i Apple.
Ny fomba fampandehanana ny foiben'ny fampandrenesana dia mitovy amin'ny etsy ambony, izany hoe, amin'ny rantsantanana roa azontsika atao ny fihetsika avy eo ankavanana kavia eo amin'ny sisin'ny trackpad ka hita eo amin'ny efijery. Azonao atao ihany koa ny mampiasa ny fiasa mitovy amin'ilay foibe fampandrenesana rehefa misy baravarankely pop-up misy fampandrenesana hita eo amin'ny ilany ankavanana ambony amin'ny fipihana eo fotsiny mba hanokafana ilay rindranasa mifandraika amin'izany.
Araka ny hitantsika tamin'ny kinovan'ny iOS, Yosemite dia manampy widget ho an'ny daty, kalandrie, tambajotra sosialy, tsenan'ny stock, fampahatsiahivana, fotoana, hetsika. Raha mijery ny farany ambany amin'ny foiben'ny fampandrenesana izy dia mahita bokotra "Ovay" hanampiana sy hanesorana ireo widgets, ao anatin'izany ireo izay novolavolain'ny antoko fahatelo. Ho fanampin'izay, azo atao ihany koa ny mandamina izay rehetra tadiavintsika ny fandaminana mety indrindra amintsika, izany hoe afaka miala amin'ny tambajotra sosialy amin'ny laharana voalohany, esory ny stock iray ary ampio hafa avy amin'ny antoko fahatelo.
Vantany vao vonona ny zava-drehetra amin'ny alàlan'ny bokotra Edit izay afaka ampifanarahintsika ny fepetra takiana amin'ny widget manokana amin'ny alàlan'ny fanindriana ny bokotra «i» eo akaikin'io ihany, izay ahafahantsika manampy toerana maro kokoa amin'ny fotoana Widget na manampy faritra misy fotoana amin'ny widget Clock.
Ireo fiasa rehetra ireo dia midika fa isan'andro izay mandalo, miaraka amin'ireo mpamorona mifantoka amin'ny famoronana widgets ho an'ny fampiharana azy ireo dia miafara amin'ny fandaozana ny Ny OS X Dashboard efa tonta tanteraka.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Mac OS X » OS X Yosemite » OS X Yosemite sy ny fampiasana widget
Rivas87 dia hoy izy:
Misy zavatra iray tiako amin'ny widgets amin'ny toetr'andro ary ity dia ny mamantatra fa ny toerana misy azy dia tianao ary tsy mamerina azy. Tsy mitranga izany ao amin'ny iOS 8 fa tokony 😀
Mamaly an'i Rivas87
josemamu dia hoy izy:
omaly alina dia milamina kokoa ametrahana milamina yosemite apetraka amin'ny macbook pro retina 13 santimetatra, ary ny TSY MISY, aloka, dia toa banga ilay mahita ary tsy mampiseho ny fisie raha tsy miverina na miova amin'ny modely vonona ilay mahita, maharitra ela be ny famoahana pejy web , Manana fitetezana 10 megabytes aho ary nandany efa ho iray minitra ny famoahana pejy izay misy mavericks, dia tao anatin'ny segondra vitsy, ankoatry ny youtube, zavatra maharikoriko, mieritreritra aho fa mbola betsaka ny azo anaovana poleta, ary ny zavatra ratsy indrindra dia ny manantona mail ... hendry kokoa ny miandry ny 10.10.1 satria mbola maitso be io.
Mamaly an'i josemamu
Heveriko fa ny olana dia eo amin'ny efijery retina satria zavatra mitovy no mitranga amiko fa hitako tamin'ny MacBook Air izany ary tsy nanana ireo olana ireo aho
Amin'izao fotoana izao, ny zava-drehetra dia mety amin'ny iMac 27 faran'ny taona 2012 ary amin'ny MacBook Pro retina 13 faran'ny 2013, tsy misy fahasarotana lehibe ary ny fametrahana dia tanterahina amin'ireo betas mifanaraka amin'izany satria nokendrena tamina programa voalaza. Atsaharo ny rafitra avy eo am-boalohany nefa tsy mametraka karazana fampiharana na fikirakirana teo aloha.
Vihum dia hoy izy:
Salama daholo .. Tiako raha misy afaka manampy ahy hamaha ny olan'ny TSY afaka mahita ireo widgets.
Nodinihiko ireo serivisy ary aorian'ny fanavaozana dia tsy hitako ny serivisin'i paoma manokana, satria na dia avy amin'ny safari aza ny fizarana fizarana dia tsy mampiseho zavatra amiko ary tsy mahazo serivisy aho.
Ary ao amin'ny Widgets .. tsy misy hita ireo ..
Mankasitraka ny fanampiana an'ity lohahevitra ity aho!
Valiny tamin'i Vihum
Avereno jerena ny rafitra, sintomy ny sary avy amin'ny AppStore ary alefaso ny installer. Raha mbola manana olana ianao aorian'izany dia andramo ny fametrahana madio fa aza mampiditra fanahafana teo aloha ary andramo amin'ity fomba ity, hialana amin'ny olana amin'ny solosainao.
Juan Alonso dia hoy izy:
Salama hariva, nametraka an'i Yosemite aho ary toa milamina ny zava-drehetra (imac27 2012) afa-tsy rehefa mijery Safari aho dia mahazo varavarankely pop-up, rehefa manindry bokotra vaovao aho dia miseho ny mckepler sy ny toa azy.? Izaho dia nitady mpitsikilo ho an'ny Yosemite ary mbola tsy nahita na inona na inona aho, hanana zavatra tsy mety aho amin'ny fikirakirana:?, Misaotra betsaka mialoha sy arahaba.
Valiny tamin'i Juan Alonso
Jordan Cortes dia hoy izy:
Misy olona afaka manampy ahy ve afaka mamorona fampahatsiahivana ao amin'ny solaitrabe vaovao. satria feno ny widget fa hita ny fampahatsiahiviko.
Valio ny valisoa jordan
Salama, manana olana aho, nanodina ny iMac napetrako fotsiny ny kapiteny ary omaly aho nanana ireo widgets fa tsy hitako izao, manome azy io hanovana dia miseho ihany:
famintinana ny anio ary famintinana ny ampitso, nanjavona ny ambiny, ny an'ny kalandrie, calculator, monity sns ...
hainao ve ny mamerina azy ireo?
Salama, manana olana mitovy amin'i Ruben mandritra ny fotoana fohy aho, satria eto dia nanjavona ireo widgets ary na ny fanovana ny lisitra aza tsy miseho akory izay tonga tampoka ao amin'ny rafitra, toy ny calculator.
Efa nisy namaha ity olana ity ve?
Moa ve ny Mac Mini vaovao amin'ny faran'ny taona 2014 manao ratsy noho ny teo alohany?
OS X Yosemite dia manatsara ny fananganana OS X Mavericks mandritra ny 24 ora voalohany